Uranda - Timothée de Fombelle: “Mumwe nemumwe ari kubviswa nehupenyu hwake hwese! "- Jeune Afrique - Tamban RELAY
Uranda - Timothée de Fombelle: “Mumwe nemumwe ari kubviswa nehupenyu hwake hwese! "- Mudiki Africa
Mu "Alma, le vent se lève", muFrench mutsivi anopa chikamu chekutanga che trilogy yakatsaurirwa nhoroondo yehuranda.
Munyori anozivikanwa ne Tobie Lolness, mufananidzo wezvekudenga uye wekudetemba pamusoro penyika dzazvino, Timothée de Fombelle anotevera mune rake opus mutsvaidzo wechidiki Oko, chikamu chemhuri icho chakapambwa nevatengesi vevaranda, Joseph, mutambi wechiFrench wakakwira wengarava yevaranda, uye nechaunga chevamwe mavara. Chikamu chekutanga che trilogy chine simba verve, chakatsigirwa nehupfumi zvinyorwa uye chakatakurwa nekunyora kunge kwakaomarara sekwakabviswa.
Young Africa: mweya, iyo huru fresco pahuranda iwe uchangotanga, wakazvarwa kubva kunogara ku Africa pawakanga uchiri kuyaruka.
Timothée de Fombelle: Pandakanga ndoda kusvitsa makore mashanu, ndakagara kwegore kuMorocco, muAgadir. Baba vangu vaive mugadziri uye wedhorobha akaronga, ivo vaitarisira chirongwa cheguta nyanzvi. Iyi nguva yakatendera murume mudiki wechiFrench akazvarwa muParis muna 5th kuti ini ndaive ndainzwa kuwanikwa kune imwe nzvimbo. Gare gare, potse pazera ramakore gumi nematatu, ndakagara kwemakore maviri kuIvory Coast, baba vangu vanoshanda kuUrban Planning Workshop muAbhidjan. KuJean-Mermoz koreji, ndakakwanisa kusangana nevanhu vazhinji. Yakanga iri nguva yakakomba yekuwanikwa. Pakanga pasina zano nesu kuvaka zvakare rudzi rwechidiki France kunze kwenyika, uye Abidjan ndiyo yaive nzvimbo yekutanga yekufamba kuenda kuMali neGhana. Nhasi, pandinofanira kuzviwana munguva, ndinoona kuti ndangariro dzangu dzose dzakavakirwa panguva ino: kune yekutanga uye shure kweCôte d'Ivoire.
Wakachinja panguva iyoyo?
Shanduko yakabatana nekukwira kumusoro, kune imwe nzvimbo, izvo zviri obsSE mune izvo ini kunyora. Kuzviwana ini muAdidjan idanho rinonzwa zvakanaka uye rinobvumidza ini kuwana hupenyu hwakasiyana kwazvo neyangu, apo ndakanga ndiri mumakore angu ekuyaruka. Zvakandishandura. Panguva ino, isu tine masiponji anonwisa mvura kune zviri kutikomberedza, uye kunyange vabereki vedu havagone kuona kukura kwezvedu zvatiri mukupfuura. Semunhu mukuru, ndaida kubva. MuVietnam, semudzidzisi wechidiki, ndakaziva kuti ndaitsvaga Africa muAsia!
Pakazosara paine mutsara wechikamu cheava varume nevakadzi muvhuvhu hwevhu
Zvinobva kuIvory Coast kuti iwe unowana maforogo akavakirwa pamhenderekedzo ...
Munguva yemazororo eAse Saints, takabva kuGhana, mune yedu Mazda station ngoro. Takashanyira tambo tese yemaforati andinotaura nezvangu mweya: Elmina, Cape Coast, Shama. Ndiine kamera yangu yakandikomberedza mutsipa wangu, ini ndanga ndisingazive zvandaizowana kana tasvika kekutanga kweaya chena chena achiwira mugungwa. Ini pasina mubvunzo ndakanzwa nezvedambudziko rehuranda, asi chaive chinhu chisinganzwisisike. Ikoko, murindi akatitsanangurira zvakanyatsoitika munzvimbo ino umo zviuru zvevaAfrica - mamirioni mhiri kwemahombekombe - vakapfuura vasati vasungwa kuti vayambuke Atlantic. Pakazosara mafambiro eaya eaya varume nevakadzi munyowani yeguruva renzvimbo dzenhare. Zvairemera.
mu mweya, vatambi vanoverengeka vanoziva izvo nezvechokwadi nenzira imwechete.
Ehe, shanduko iyi inokurudzirwa nekuziva kwangu uye kunyanya nzira yandaizoda kutora yangu vaverengi. Tinogona kudzidza kuti ruzhinji rwevanhu rwakabvisirwa kune imwe kondinendi, asi vaive vanhu vane nhoroondo yavo yega. Chimwe nechimwe chakabviswa nehupenyu hwayo hwese! Izvi ndizvo zvandakaziva muElmina.
"Alma, le vent se lève", rakanyorwa naTimothée de Fombelle, rakabudiswa naGallimard Jeunesse musi waChikumi 11, 2020. © François Place / Gallimard jeunesse 2020
Wakanyora zvakanyanya here?
Ehe, ini ndinoita seongororo ndichinyora. Zvinyorwa zvangu zvakasiyana. Kune mabhuku enhoroondo anotsanangura zvatinoziva nezvekutengeswa kwevaranda veAtlantic, sevaya veMarcus Rediker mungarava yevaranda, piracy uye zvese zviitiko zvegungwa. Atlantic yezana negumi negumi ramakore uye inofarira kune vakanyanya kutambudzika. Ini ndakaverengerawo chaizvo dzidzo zvidzidzo, kusanganisira imwe yekutengesa muLa Rochelle. Uye, nekuda kwaGallica, raibhurari yepamhepo yeBnF [Raibhurari yeNyika yeFrance], ndakawana zvinyorwa zvechisimba izvo zviri mabhuku echikepe, nehuchapupu hwakawanda kubva kune vatengesi vevaranda, izvo zvinoshungurudza zvakanyanya. .
Nhau dzevaranda dzinowanzoitika
Ngano dzevaranda, senge dzeOlaudah Equiano, iyo inopa maonero kubva kubato uye kwete kubva padenga repamusoro, havawanzo. Kune ufakazi hushoma kubva kumatare edzimhosva hunotaurira rwendo uye kuyambuka kwevamwe varanda, asi ivo vanogona kuverengerwa paminwe yerumwe ruoko, nepo maererano nehupenyu muminda yakawandisa. Ini ndakazvinyorawo pachangu kuAfrica yekare. Tsvagurudzo munzvimbo ino yakadzika mumakore apfuura, zvikuru nekuda kwebhuku rakanyorwa naFrançois-Xavier Fauvelle. Uyezve kune zvekare mabasa evamwe vanhu vanopenga, saJean Boudriot, akanyora pane chikepe chinodaidzwa Dawn!
Uyu ndiye akakurudzira Iyo Inotapira Amelie, umo Alma anotanga ...
Ehe, ichi chikepe chakasara muna 1784, makore maviri zvisati zvaitika Iyo Inotapira Amelie. Ini ndine makumi mashanu kana makumi matanhatu ekupfura muchikepe ichi uye chimiro chayo chinondibvumidza kufamba ndichikomberedza. Dawn akabva kuRochefort, kwaakange akavakirwa, yekuyambuka yekirasi. Akasvika muSenegal, akabva afamba nechikepe achienda kuumambo hweKongo. Ipapo, yakayambuka iyo Atlantic yakananga kuSanto Domingo, ipapo pakukwirira kwekubwinya kwayo. Kutengeswa kwevaranda kwaive kwakasimba ipapo kubvumira kugadzirwa kweshuga.
Ndangariro inotanga kuve vapenyu kana isu tichigona kuiisa nekufungidzira
Alma ndiye mumwe wevamiriri vekupedzisira veOko vanhu. Vanhu ava vaivapo here?
Kwete, iri chikamu changu chekufungidzira. Ini ndaida rusununguko urwu mune chairo pasirese yandinotsanangura nekumutsa humambo hweBoussa, rwizi rweNiger, Ashantis. Ini ndakatambura zvakanyanya ndichirava izvo zvaivapo mumabhuku pachinhu ichi: nzira dzakajairwa dzevasungwa vechidiki ... mune rudzi "Rarama hupenyu hwangu semuranda"! Ndangariro inotanga kuve vapenyu kana tichigona kuiisa nekufungidzira. Iyi ndiyo nzira chete yekubhadhara kwaari. Saka ini ndakagadzira iyo Okos, iyo inondibvumidza kuti ndiswedere kune iyo inoshamisa neiyi pfungwa yevanhu avo, vari kuderedzwa, vanoisa pfungwa pazvinhu uye matarenda. Zvakawanda kwazvo zvekuti ivo vanenge vava kuzowana superpowers.
Kune orisha ine zita iri ...
Vanhu ava rudzi rwekufananidza, imwe nzira yakaenzana yekubhokisi yezvinhu zvakatorwa kubva kumarudzi akasiyana. Ndakaverenga nyaya yeguta rakasiiwa nekukurumidza, pasina munhu anoziva kuti nei, uye kwatakawana yakawanda yehari. Iko mune mikwende yerudzi urwu rwechakavanzika chandakagadzira vanhu ava. Izwi iro pacharo rinogadzira, kunyangwe paine vanhu veOyo ...
Pane chinhu chemashiripiti mune yako novel. Imhaka here kuti kazhinji inowanzobatanidzwa nekondinendi?
Ini ndaida kuti kuve nemashiripiti - kana iye agara pasi, zvinomera zvinokura pasi pehama yaAlma - nekuti mhando yekuona iyoyo inondifambisa. Asi ini ndingadai ndisina kushandisa Spider-Man superpower, ini ndaida kuseta mashiripiti aya mutsika dzemuAfrica, nziyo uye vatyairi kunyanya. Amai vaAlma, vanobata ngarava pamwe chete nenziyo yavo nenyaya yavo, ini handina kumugadzira. Pane ngarava yevaranda, mukadzi akasiyiwa kuti aimbe usiku nekuti, paakaneta, kumukira kwakadzvova. Iyo nyaya inoita kuti ndifunge kuti handifi ndakararama zvinoitika.
Mune iyi tome, iwe unotaura kuti maAfrica vakabata sei vamwe maAfrica.
Vese vanyori venhoroondo vanotaura nezvazvo. Muzana ramakore rechi XNUMX, pakanga pasina kupambwa, nekuti VokuMadokero vaitya. Vaifarira kuexource basa iri raive nengozi raida kuti vatame kubva kwavo uye varwe kana vachinge vakuda kutaurirana. In mweya, Ini ndinoratidza kuti kutengeserana uku, pamwe chete nezvikepe nezvipenga zvadzo zvakamedza vanhu, zvakaronga Africa zvachose. Izvi zvekusimudzira zvinokonzerwa nekuchiva kwekofi uye shuga mune zvivanze zveEuropean. Ini handisi kukanganisa nezve ruoko runozviraira. Nemavhoriyamu matatu emapeji mazana mana, ndinogona kuratidza kuoma kwenyaya iyi.
Mavara ako akaomerawo. Uye zvakadzama munhu.
Zvangu zvakasvibirira zviri munhu uye zvakasarudzika zviri mumunhu. Kunyangwe ndikatsigira muEurope kana muAfrica, ndinozviita saizvozvo. Hunhu hwega hwega hune zvikamu chiuru, uye ini handikwanisi kugona kuumba villain ndisina kuratidza chakakanganiswa chakamuita kuti areve. Ini handisi kuedza kuvapembedza - Ndine mamwe marara chaiwo mune yangu yemifananidzo gallery! -, asi ivo havana kubva mudumbu raamai vavo nechiratidzo "chakashata" pahuma.
Iwe uchine chaiwo Marxist maonero ehukama pakati pevakanaka vakomana vakaipa ...
Ichowo chiratidzo chekaresa chenhau yekusingaperi, vachipikisana nemhumhi negwayana. Ini ndine zvakanaka zvekare zvikanganiso zvemushambadzi anoenderana nerima villain neyavarombo chinhu chidiki chinodzingwa nehupenyu. Aya maonero ekuremara kwehukama hwatinowana mairi Tobie Lolness naJo Mitch, mhando yezvivakwa tycoon, ndiko kuratidzwa kwehupenyu.
Ino nguva munhoroondo iri kushamisa mukuti inoramba chikamu chevanhu
Sechikamu chekutengesa, ini handina kunetseka kuvaka hunhu hwemunhu villain. Ino nguva munhoroondo iri kushamisa mukuti inoramba chikamu chevanhu. Uye munhu wese akabatsirwa nazvo. Mubiki kubva pakadzika peFrance aigona kutengesa mabhisikiti ake kunyange pazvikepe! Europe yakavakwa seizvi!
Ndeapi mavheji maviri anotevera achaitika?
Yechipiri inotangira muguta reCap-Français uye inoitika muSanto Domingo pamwe neLouisiana, kudivi rekudyara. Iko kune zvakare chikamu cheEuropean, nekutanga chaiko kwekubvisa muEngland, kutenderera munhu aive aripo zvechokwadi, Thomas Clarkson, wechidiki Briton uyo anotanga kurwira kusunungurwa kwevaranda. Uye Alma achasangana zvakare muVersailles munguva yechando yakatangira Kumukira kweFrance. Yechitatu vhoriyamu inotarisa kumukira kukuru kweSanto Domingo. Pamwe chete nekusafambiswa kweEuropean kubviswa, ndinoda kubata marronnage uye idzo nguva apo varanda vanoedza kuzvisunungura.
Kupokana mugirazi remvura
Ndiro kubva kubhuku "Alma", rakanyorwa naTimothée de Fombelle. © JOEL SAGET / AFP
Gakava diki rakamutsa nharaunda yekunyora pakubuda kweAruma. Iye weAnglo-Saxon mupepeti weTimothée de Fombelle, Walker Mabhuku, akasarudza kusazviburitsa nekufungidzira kuti kunge chena munyori angave asiri pamutemo kutaurira nyaya yemwana mutema akasangana naye. uranda. Ino haisi nguva yekutanga kuti iyi mhando yemazano yakokokwa mukupokana: pane imwe nguva apo vamwe vakapona mumisasa yevasungwa vakaramba kuti nyaya yavo inyaya yebhuku rekufungidzira. Asi kusundidzira pfungwa iyi kusvika kumagumo kwaizove kusaina warandi wekuti kufa kwemabhuku ese. Mumwe Victor Hugo akanyora muchinyorwa Kufungisisa: “Dzimwe nguva tinonyunyuta nezvevanyori vanonditi. Tiudze nezvedu, isu tinovashevedzera. Maiwe! Kana ndotaura newe nezveangu, ndiri kutaura pamusoro pako. Iwe hausi kuzvinzwa sei? Ah! Iwe benzi, ndiani anofunga kuti handisi iwe! "
Belgium: Brawl muBlankenberge: vatatu vanosungwa vanosungwa uye ...
India: 'Kisan Rail' chirongwa chekubatsira varimi: PM…
Kutsiva kwaFatou Bensouda kuICC: vari kukwikwidza vari kunetsekana - Jeune Afrique
Makore makumi matanhatu okusununguka kweBenin: mhemberero ine mwero nekuda kweCovid-60 - Jeune Afrique